Mompera Marc Ravelonantoandro rekteran’ny Université Catholique de Madagascar manazava ny fiatrehana ny valanaretina - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ny ezaka nataonay voalohany raha vao nanomboka niditra tamin’ny volana oktobra ny andiany voalohany faculté ecclésiastique misy ny philosophie sy théologie, dia avy eo ny faculté sasany momba ny science sociale sy ny science momba ny maha olona, tamin’ny volana novambra dia napetraka ny fiteny hoe araka izay azo atao dia enjehina vitaina ny cours. Afaka miditra vao maraina amin’ny 7ora, tsy alohan’io kosa aloha, fa izany ary tena efa sarotra ho an’ny ankizy sasany izay mipetraka lavitra. Atao 5 hatramin’ny 6 ora hariva fara-fahatarany satria ny fodiana koa tena sarotra, indrindra ihany koa eo amin’ny lafiny fandriam-pahalemana. Izay izany ny vahaolana anankiray eo amin’ny famitana ny cours. Ny faharoa mifandray amin’izay dia ny nametrahanay ny alarobia hariva ho tsy fianarana fa mba ahafahana manao activités para universitaires. Izany hoe ahafahana manao ireo associations sportives, association d’activités culturelles sy artistique. Nofoanana ireny fa nasiana cours ihany koa ka ny sabotsy hariva no malalaka, ka afaka manao ireny ny mpianatra. Misy roapolo any ho any ireo clubs sy associations hamolavolana ireo tanora amin’ny ara-talenta sy ara-panahy.
Ny vahaolana fahatelo noraisinay ihany koa dia ny hoe : ny cours koa dia misy ny atrehina, fa misy ihany koa ny atao numerique. Izany hoe ny zoom no tena fampiasanay. Indrindra ireo mpampianatra avy any ampitan-dranomasina tsy afaka makaty dia manome fampianarana amin’ny alalan’ny zoom. Azo lazaina hoe tafavoaka ihany ilay izy amin’ny ankapobeny. Misy ihany olana madinidinika, toy ny connexion, décalage horaire fa tanteraka tsara ihany.
Etsy andaniny dia nanao ezaka lehibe izahay tamin’ny fampiharana ny lalàna amin’ny hamehana ara-pahasalamana. Eo ny fanajana ny elanelana, ny fitondrana ny cache-bouche, nasiana fanentanana tamin’ny voalohany dia avy eo amin’izay nasiana fanaraha-maso. Vao miditra eny am-bavahady dia efa tsy maintsy manao gel sy jerena ihany koa ny hafanana. Ny ankizy moa rehefa marary dia nasaina nijanona any an-trano ary nomena fahafahana izy ireny hanenjika izay zavatra tsy vitany.
Isika dia miara-miady amin’ny Coronavirus, fa isika koa amin’ny maha mpianatra antsika dia tsy ekentsika ny hoe ho taona fotsy fa tsy maintsy vitaintsika ny taom-pianarana. Tsorina aloha fa mitombo ny fandaniana, kanefa ny fampianarana dia tsy orinasa fitadiavam-bola fa fanaovana service. Ezahana arak’izay, tazonina foana ilay hoe fanatsarana mitohy eo amin’ny fitantanana.